အေထြေထြဗဟုသုတ Archives - Thuta Music
လူ သိနည်းသော နမိတ် များ ဒါမျိုးတွေ မလုပ်မိအောင်ရှောင် ပါ
March 3, 2021 by Thuta Music
လူသိနည္းေသာနမိတ္မ်ားဒါမ်ိဳးေတြမ လုပ္ မိေအာင္ေရွာင္ပါ အိမ္ေရွ႕တေရာ္ထုပ္မခ်ိတ္ပါႏွင့္အိမ္ရွိလူမ်ားက်မ္းမာေရးညံ့တတ္၏စားပြဲေပၚဖိနပ္မတင္ပါႏွင့္ဖိနပ္ပိုင္ရွင္ထိုအိမ္မွထြက္ခြာသြားရတတ္၏ဓားကတ္ေၾကးလက္ေဆာင္မေပးပါႏွင့္ကိုယ့္လာေပးလွ်င္လည္းေငြအနည္းငယ္စတိျပန္ေပးပါ ။ ထိုသူႏွင့္ဆက္ဆံေရးအဆင္မေျပျဖစ္ၿပီးလမ္းခြဲရတတ္၏ကတ္ေၾကးမကစားပါႏွင့္ကံဆိုးျခင္းကိုဖိတ္ေခၚတတ္၏အဝါေရာင္ပန္းလက္ေဆာင္မေပးပါႏွင့္လက္ခံသူကံဆိုးတတ္၏ ။ ညအခါလမ္းေနာက္ျပန္မေလွ်ာက္မိပါ‌ေစႏွင့္နာနာဘာဝတို႔ကိုယ့္ေနာက္လိုက္လာတတ္၏ထာင္ထားသည့္ေလွကားေအာက္ျဖတ္မေလွ်ာက္ပါႏွင့္ကံဆိုးတတ္၏စကားၿပိဳင္တူေျပာမိလွ်င္ေဂၚမစြံျဖစ္တတ္ပါသည္ ။ ေျပာမိရင္ကိုယ့္ႏွာေခါင္းျပန္ကိုင္လိုက္ပါၾကည့္မွန္ကြဲမသုံးပါႏွင့္ကံညံ့တတ္၏ဖုန္းမွန္ကြဲမ်က္မွန္ကြဲလည္းထို႔အတူမွတ္ယူပါညစားစားရင္းသီခ်င္းမဆိုပါႏွင့္မေကာင္းဆိုးဝါးဝင္စားတတ္၏ ။ နွစ္ေယာက္ထိုင္ခုံတစ္ေယာက္တည္းထိုင္ရင္ေထာင့္ကပ္မထိုင္ပါႏွင့္ဌက္ေပ်ာတုံးဖက္ရတတ္၏ေလမိုးက်ခ်ိန္အ၀တ္အစားအနီေရာင္ဝတ္ၿပီးအျပင္မထြက္ပါႏွင့္မိုးႀကိဳးပစ္ခံရတတ္၏ကေလးငယ္မ်ားအေပၚခုန္ေက်ာ္မကစားပါႏွင့္ထိုကေလးသက္ဆိုးမရွည္ျဖစ္တတ္၏ ။ ခရက္ဒစ္ unicode လူသိနည်းသောနမိတ်များဒါမျိုးတွေမ လုပ် မိအောင်ရှောင်ပါ အိမ်ရှေ့တရော်ထုပ်မချိတ်ပါနှင့်အိမ်ရှိလူများကျမ်းမာရေးညံ့တတ်၏စားပွဲပေါ်ဖိနပ်မတင်ပါနှင့်ဖိနပ်ပိုင်ရှင်ထိုအိမ်မှထွက်ခွာသွားရတတ်၏ဓားကတ်ကြေးလက်ဆောင်မပေးပါနှင့်ကိုယ့်လာပေးလျှင်လည်းငွေအနည်းငယ်စတိပြန်ပေးပါ ။ ထိုသူနှင့်ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးလမ်းခွဲရတတ်၏ကတ်ကြေးမကစားပါနှင့်ကံဆိုးခြင်းကိုဖိတ်ခေါ်တတ်၏အဝါရောင်ပန်းလက်ဆောင်မပေးပါနှင့်လက်ခံသူကံဆိုးတတ်၏ ။ ၆ညအခါလမ်းနောက်ပြန်မလျှောက်မိပါ‌စေနှင့်နာနာဘာဝတို့ကိုယ့်နောက်လိုက်လာတတ်၏ထာင်ထားသည့်လှေကားအောက်ဖြတ်မလျှောက်ပါနှင့်ကံဆိုးတတ်၏စကားပြိုင်တူပြောမိလျှင်ဂေါ်မစွံဖြစ်တတ်ပါသည် ။ ပြောမိရင်ကိုယ့်နှာခေါင်းပြန်ကိုင်လိုက်ပါကြည့်မှန်ကွဲမသုံးပါနှင့်ကံညံ့တတ်၏ဖုန်းမှန်ကွဲမျက်မှန်ကွဲလည်းထို့အတူမှတ်ယူပါညစားစားရင်းသီချင်းမဆိုပါနှင့်မကောင်းဆိုးဝါးဝင်စားတတ်၏ ။ နှစ်ယောက်ထိုင်ခုံတစ်ယောက်တည်းထိုင်ရင်ထောင့်ကပ်မထိုင်ပါနှင့်ဌက်ပျောတုံးဖက်ရတတ်၏လေမိုးကျချိန်အဝတ်အစားအနီရောင်ဝတ်ပြီးအပြင်မထွက်ပါနှင့်မိုးကြိုးပစ်ခံရတတ်၏ကလေးငယ်များအပေါ်ခုန်ကျော်မကစားပါနှင့်ထိုကလေးသက်ဆိုးမရှည်ဖြစ်တတ်၏ ။ ခရက်ဒစ်
မတော်တဆ လည်ချောင်းမှာ ငါးအရိုးစူးလျှင် ဒါတွေလုပ် လိုက်ပ
မေတာ္တဆ လည္ေခ်ာင္းမွာ ငါးအရိုးစူးလၽွင္ ဒါေတြလုပ္ လိုက္ပါ ငါး အရိုးဆူးလွ်င္ အေတာ့္ကို ခံစားရခက္သည္မွာ အားလံုးလည္း သိျပီးျဖစ္မွာပါ။ တစ္ခါတရံ ခဏေလးနဲ႔ ေပ်ာက္သြားတတ္ေပမယ့္ အခန္႔မသင့္လွ်င္ေဆးရံုတက္ျပီး လည္ေခ်ာင္းကေန ခြဲထုတ္ရတဲ့အထိ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္ …။ ဒါ့ေၾကာင့္ ငါးအရိုးမဆူးလွ်င္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏုိင္မယ့္ အိမ္ တြင္းကုထံုးေလးမ်ားကို ရသမွ်စုစည္း၍ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႔ အဆင္ေျပရာနည္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကပါတယ္ …။ (၁) သံပုရာသီးကို အခြံမာမ်ားခြါ၍ အလံုးကို သြားၾကားထိုးသံျဖင့္ အေပါက္ေလးမ်ား ထိုးဆြထား၍ေခတၱမ်ွ ငံုထားပါ။ အရည္ကို တေျဖးေျဖး မ်ိဳခ်ေပးပါ။ အခ်ဥ္ဓါတ္က ငါးရိုးမ်ားကိုတိုက္စားသြားေပလိမ့္မယ္ …။ (၂) ငွက္ေပ်ာသီး စားပါ။ ဘာငွက္ေပ်ာသီးပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပပါတယ္ …။ (၃) ၾကက္ဥအကာကို ေသာက္ေပးပါ။ ငါးရိုးမ်ား အခြ်ဲမ်ားႏွင့္အတူ … Read more
လမ္းမွာ ေတြ႕တဲ့သူ ရပ္ခိုင္းၿပီးဖုန္းေတြ စစ္တယ္လို႔သတင္းေတြၾကားတယ္ဗ်၊ အဲ့ဒါ ေစာက္ျပသနာအႀကီးႀကီးရွိတယ္၊ (ဖုန္းထဲက အခ်က္အလက္ေပၚမူတည္ၿပီး တပ္ခ်င္တဲ့ ပုဒ္မတပ္လို႔ရသြားၿပီ) ဥပေဒႏွင့္အညီေတြဘာေတြ အယုံအၾကည္မရွိေတာ့ေပမယ့္ လိုအပ္လိုလိုအပ္ျငား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း အႀကံေပးပါ့မယ္။ လုပ္ရမွာကေတာ့ ၁။ ဖုန္းကို pattern lock ခ်ထားပါ , face id ေတြ လက္ေဗြေတြ မလုပ္ထားပါနဲ႔ ၊ ၂။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ data ေတြကို cloud မွာပဲ ထားပါ ၊ (လိုအပ္ရင္ အျမန္ဖ်က္ႏိုင္ေအာင္လို႔) ၃၊ facebook account ကို app ဖ်က္ၿပီး browser နဲ႔ သုံးပါ၊ ၄၊ ဖုန္းလာသိမ္းရင္ လုံးဝမေပးပါနဲ႔၊ (လုံၿခဳံေရးအရ စစ္ေဆးတာဘာညာဆိုလည္း ကိုယ့္privacyအရ ဖြင့္မေပးႏိုင္ေၾကာင္းရယ္၊ သိမ္းခ်င္ရင္ … Read more
အိမ္ေဆာက္ေနတုန္း အုတ္ခဲ လာေတာင္းရင္ လံုး၀ မေပးလိုက္ပါနဲ႔
ကျွန်တော့်ကားပျက်သွားလို့ ကားပြင်ဖို့ ဝပ်ရှော့ကို ပို့ထားလိုက်ရတယ်။ ဒါကြောင့် မြို့ပတ်ရထားစီးပြီး အလုပ်သွားဖို့ အိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ ဘူတာရုံကို လမ်းလျှောက်သွားလိုက်တယ်။ဘူတာရောက်တော့ ရထားလာဖို့ စောင့်နေတုန်း ဘူတာရုံပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာ ခွက်လေးတစ်လုံး ရှေ့ချပြီး ငုတ်တုပ်လေး ထိုင်နေတဲ့ အသက် ၅၀ အရွယ် လူကြီးတစ်ယောက်ကို သတိထားမိလိုက်တယ်။ သူဟာ အဝတ်အစား နွမ်းနွမ်းပါးပါးကို ဝတ်ထားတယ်။ သူ့မျက်နှာမှာ ထမင်းအလွန်ဆာနေပုံ ပေါ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရုပ်ရည်ဟာ သန့်ပြန့်လို့ သူတောင်းစားတစ်ယောက် မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ ကျွန်တော်တွက်မိတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို သနားတာနဲ့ ဘူတာရုံဘေးက ထမင်းတစ်ထုတ်ဝယ်ပြီး သူ့ဆီ သွားပေးလိုက်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ ရထားဝင်လာလို့ သူ့ကို စကားမပြောနိုင်ဘဲ လက်ထဲက ထမင်းထုတ်ကို ပေးပြီး ရထားပေါ် အမြန်တက်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော် လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူဟာ … Read more
တစ်လမှာ ၂ ကြိမ်သာ လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ သောကကင်းစင်ငွေဝင်ငွေပွားအစီရင် သောကကင်းစင်ငွေဝင်အစီရင် ယုံကြည်စွာလုပ်ဆောင်ပါက အကျိုးထူးများသည် သောကကင်းစင်ငွေဝင်ငွေပွားအစီရင် ယုံကြည်စွာလုပ်ဆောင်ပါက အကျိုးထူးများသည်မိတ်ဆွေများ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျားယခု ဆရာတင်ပေးမည့်အစီရင်လေးက မိမိရည်မှန်းစီမံထားသည့်အလုပ်ကိစ္စများလုပ်ချင်တိုင်းမလုပ်နိုင် ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေတာတွေကတစ်မျိုးလုပ်ချင်နေတာတွေက တစ်မျိုးအလွဲ့လွဲ့အချော်ချော်ဖြစ်နေကြသည့်ကာလအတောအတွင်းမှာ စိတ်ရှုပ် စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်နေခြင်းငွေကြေးပူပင်သောကဖြစ်နေခြင်းဟူသမျှ ကာကွယ်ကင်းစင်စေဖို့ရန်နှင့် ငွေဝင်ငွေပွားစေမည့် ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောအစီရင်လေးကိုဒါနပြုပါတယ် ရရက်သားသမီး မည်သူမဆို လုပ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျားပန်းကန်ပြားမှာ ပိုက်ဆံ ၁၁ဝဝကျပ်တင်ပါပိုက်ဆံပေါ်မှာ သံပုရာသီးစစ်စစ်၂ လုံး နှင့် ရေဖြည့်ထားသော ဖန်ခွက်တင်ထားပါ အိမ်ဘုရားမှာ တနင်္လာနေ့ တစ်ညထားပြီးလျှင် နောက်နေ့ အင်္ဂါနေ့ နံက်( ၇ )နာရီမှ ( ၇ )နာရီခွဲအတွင်းသံပုရာသီးတစ်လုံးကို ၄စိပ်စိပ်ပြီး အိမ်ခြံ တိုက်ခန်း ထောင့် ၄ထောင့်မှာ တစ်စိပ်စီ ချထားပါ ကျန်တစ်လုံးကို ၂စိပ်စိပ်ပြီး ဖန်ခွက်ရေထဲညှစ်ထည့်၍ အိမ်ခြံဝင်းပတ်ပတ်လည်မှာ … Read more
အငယ်ဆုံးလေးတွေဆိုတာ… အငယ်ဆုံးလေးတွေဆိုတာ . . . .အများအမြင်မှာ အလိုလိုက် ခံရတယ်လို့ ထင်တတ် ကြတယ် ။ တကယ်တမ်း ကြတော့ အလိုလိုက် ခံရတာ ထက် အနစ်နာခံ ရတတ်တာ များပါတယ် ။ အငယ်က အငယ်နေရာနေ ဆိုတဲ့ စကားတွေနဲ့ ပြောစရာ စကားတွေကို မြိုသိပ် ပစ်ရ တာလဲ များပါတယ် ။ အစစအရာရာ အရင်ဦးဆုံး ရလိမ့်မယ် လို့ ထင်တတ် ကြတာ ကိုယ်ပူဆာခွင့် မရခဲ့တဲ့ အရာတွေမှ အများကြီးပဲ အရာအားလုံး မဟုတ်ပေမယ့် တော်တော် များများ ပါ ။ ပြီးတော့ . . . မိသားစု အပေါ် ပိုပြီး တွယ်တာ … Read more
မ်က္ရည္ယိုဗုံး ထိခဲ့ရင္ အျမန္သက္သာေစမယ့္ နည္းလမ္း
မီးခိုးေငြ႕ေတြ၊ မီးေသြးေမႊးလို့ မီးခိုးရင္ေတာင္ မ်က္ရည္က အလိုလို က်လာတယ္။ ဒီ မီးခိုးေတြကလည္း အဆုတ္ အပါအဝင္ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ေစနိုင္ပါတယ္။ ဒါဆို နိုင္ငံတကာ သတင္းေတြထဲမွာ ေတြ႕ေနရတဲ့ ဆႏၵျပတဲ့အခါ လူစုခြဲဖို့ သုံးေလ့ရွိတဲ့ အရာေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ မ်က္ရည္ယိုဗုံး က ထိမိခဲ့ရင္ အျမန္ဆုံး ဘယ္လို သက္သာေအာင္ လုပ္ရမလဲဆိုတာကို ေဆာင္းပါးေလးထဲမွာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ေနာ္။ မ်က္ရည္ယိုဓာတ္ေငြ႕ဆိုတာ ဘာလဲ။ မ်က္ရည္ယိုဓာတ္ေငြ႕ဆိုတာ အေငြ႕လို့သာ ဆိုေပမယ့္ အေငြ႕မဟုတ္တဲ့ aerosolized အစိုင္အခဲ (သို့မဟုတ္) အရည္ အမ်ိဳးအစား ပါ။ နာက်င္တဲ့ ခံစားမွုကို ခံစားရေစ နိုင္တဲ့ ဓာတုေဗဒပစၥည္းေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒီဓာတုပစၥည္းေတြက လုပ္ေဆာင္မွုေတြကို ေကာင္းေကာင္း မလုပ္ေဆာင္ေစဖို့ အဟန႔္အတား … Read more
ကမ္ဘာကျော်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှာတန်ခိုးပြကာကွယ်ပေးခဲ့သောတောင်ပုလုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်ရပ် လေယာဉ် ပျက်ကျတော့မယ့် အချိန်မှာ တန်ခိုးပြ ကာကွယ်ပေးခဲ့သော တောင်ပုလုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကမ္ဘာကျော် ဖြစ်ရပ် ..ဘာသာရေးနှင့်ဆက်နွယ်သော အထွေထွေ ဗဟုသုတလွန်ခဲ့တဲ့ ၃၈ နှစ်လောက်က ထူးခြားဖြစ်စဉ်တခုပါ.မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိတ္ထီလာမြို့ အနီးရှိ တောင်ပုလု တောရရိပ်သာတွင် သီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့သော တောင်ပုလု ဆရာတော် ဘုရားကြီးသည် တစ်ချိန်က ရဟန္တာဟု ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ ရတနာသုံးပါးကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်လာသူ တစ်ယောက်အကြောင်း အပါအဝင် စာအုပ်ပေါင်းများစွာကို ရေးခဲ့သူ စာရေးဆရာ ဒါရိုက်တာဦးဆန်းလွင်သည် တောင်ပုလု ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအကြောင်းပြု၍ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကာ အရှင်အာဒိစ္စရံသီ ဘွဲ့အမည်ဖြင့်ရဟန်းဝတ်ပြီး မြန်မာပြည်အနှံတရားများ လှည့်လည်ဟောခဲ့ပါသည် ။ ပျဉ်းမနား မဟာမြိုင် ဆရာတော် ဦးဇောတိကသည်လည်း ဆရာတော်ကြီးကို အကြောင်းပြု၍ ဘာသာကူးပြောင်းကာ ရဟန်းဝတ်ပြီး စာအုပ်ပေါင်းများစွာရေး၍ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးကို လှည့်လည်တရားဟောခဲ့ပါသည်။1970 ခုနှစ်ကျော်ဝန်းကျင်လောက်က အမေရိကန်ကို … Read more
မိန်းမယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာကို ကြည့်ပြီး အကြိုက်ဆုံးအဖြစ် ရွေးယူမလဲ
March 2, 2021 by Thuta Music
မိန်းမယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာကို ကြည့်ပြီး အကြိုက်ဆုံးအဖြစ် ရွေးယူရမလဲ?(အရွေးမမှားစေဖို့) မိန်းမယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာကို ကြည့်ပြီး အကြိုက်ဆုံးအဖြစ် ရွေးယူမလဲ? ငါ့သား…အိမ်ထောင်ဖက် ရှာနေတယ်ဆိုရင် မိန်းမတွေရဲ့ရင်သားနဲ့တင်ပါး အရွယ်အစားအတွက် မင်း စိတ်မပူနဲ့။ နှလုံးသား နဲ့ဦးနှောက် အရွယ်အစားအတွက်ပဲ စိတ်ပူပါ။သူမရဲ့ချစ်မေတ္တာနဲ့ သည်းခံစိတ်အရွယ်အစားအတွက်ပဲ စိတ်ပူပါ ။ နောက် ၅ နှစ် ၁၀ နှစ် ကြာပြီးတဲ့အခါရင်သားနဲ့တင်သားတွေက ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်။ အခု မင်းအမေကိုပဲ ကြည့်လေရင်ပြားကြီးနဲ့တင်ပြားကြီးသာ ကျန်တော့ပေမဲ့ ငါတို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ကြတယ်။ ငါ့သား ငွေကို ချစ်တဲ့မိန်းမတွေကို သတိထားပါ။ အဲ့ဒီ မိန်းမတွေဟာ အချိန်ပြည့် သူတို့ရဲ့ ဆံပင်တွေ အဝတ်အစားတွေဖိနပ်တွေပိုက်ဆံအိတ်တွေ အတွင်းခံဘောင်းဘီတွေနဲ့မိတ်ကပ်တွေအကြောင်း ပြောတတ်ကြတယ်။ အဲ့ဒီ အရာတွေ မပါဘဲနဲ့လဲ ကောင်းမွန်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးဟာ ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချစ်မပါဘဲတော့အိမ်ထောင်ရေး … Read more
ပိတ္ေနတဲ့ လာဘ္ပြင့္ ေစတဲ့ ရွင္သီဝလိလာဘ္ပြင့္ဂါထာ
ပိတ်နေတဲ့ လာဘ်ပွင့် စေတဲ့ ရှင်သီဝလိလာဘ်ပွင့်ဂါထာ ငွေကြေးဥစ္စာတွေ မဝင်ဘဲ လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်နေသူတွေ အတွက် တကယ်စွမ်းတဲ့ လာဘ်ပွင့်ဂါထာတစ်ပုဒ်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်…..ဒီထဲကအတိုင်း လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ရင်း ဂါထာတော်ကို ရွတ်ပေးမယ်ဆိုရင် လာဘ်တွေပိတ်နေတာတွေ ပွင့်ပြီး လာဘ်ပွင့် ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်…ပထမဆုံးလုပ်ရမဲ့ နည်းကတော့ ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင်ကို သနချေ သိဒ္ဓိတင် ဂုဏ်တော် ရွတ်ဖတ်ပြီးပါက ရှင်သီဝလိ ဂါထာကို ဖယောင်းတိုင်မှာ ဖယောင်းတိုင် အခြေကနေ စရေးပါ…ထို့နောက် ရှင်သီဝလိ ကိုယ်တော်ကြီးကိုဆွမ်းအဖြူ တစ်ပွဲကို ဆီဆမ်း ငှက်ပျောသီးတစ်လုံး အခွံနွှာ သကြားဖြူးပြီး…ရှင်သီဝလိ ဂါထာ ရေးထားသော ဖယောင်းတိုင်ကို ပုဂံသန့်သန့်တစ်ချပ်ထဲမှာ ထွန်းပါ…. ထိုဆွမ်း ငှက်ပျောပွဲ ဂါထာ ဖယောင်းတိုင်ကို ဘုရားကျောင်းဆောင်ဘေးတွင် ရှင်သီဝလိကို ယ်တော်ကို ရည်မှန်းကပ်လှူ၍ တောင်းဆုပြုပါ…. ဖယောင်းတိုင်တွင် ရေးရမဲ့ရှင်သီဝလိဂါထာ … Read more